“The Rock” ကမ်ဘာ့ ဝငျငှအေမွငျ့ဆုံး နာမညျကြျောမငျးသားဖွဈလာတဲ့ အမရေိကနျ လူဆိုးတဈယောကျ – Shwe Naung
“The Rock” ကမ်ဘာ့ ဝငျငှအေမွငျ့ဆုံး နာမညျကြျောမငျးသားဖွဈလာတဲ့ အမရေိကနျ လူဆိုးတဈယောကျ
Shwe Thuta | December 12, 2020 | Celebrity | No Comments
သူငယ်ချ င်းတွေကတော့ ကြီးပေါကြီးတဲ့ ၊ အဖေပြောတာက အရူး ၊ အတန်းပိုင်ဆရာပြောတာက စံပြဆိုးသွမ်းကျောင်းသား..ဒါပေမယ့် အမေကတော့ ကျတော့ကို အမြဲအထင်ကြီးပေးခဲ့တယ်။ “THE ROCK
၁၉၇၂ ခုနှစ် မေလ ၂ရက်နေ့ အမေရိက န်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဟေးဝေါ့မှာ နပန်းသမားတဦးဖြစ်တဲ့ Rocky Johnson နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Ata Johnson တို့ကကလေးတစ် ဦးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အဖိုး ဦးလေး အဖေအကုန် နပန်းသမားမျိုးရိုးကနေ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီကလေး ဟာ သိပ်တော့ငယ်ဘဝချမ်းသာလှတယ်မဟုတ် ဘူး။ သာမာန်အိမ်ကျဉ်းလေးတလုံးရယ် သူ့ကိုအရမ်းချစ်တဲ့အမေရယ်ပဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ဖခင်သွားရာနပ န်းပွဲတွေေ နာက်၎နှစ်သား ထဲကလို က်ခဲ့ရပြီး မိခင်နဲ့သူဟာ ဖခင်ရဲ့အမာခံပရိတ်သတ်တွေပေါ့။
ဒါပေမယ့်ဖ ခင်က သူ့ကိုသိပ်အလေး ထားမချစ်ခဲ့ဘူး။ သူကလဲင ယ်စဉ်ထဲက ဆိုးတယ်။ မူလတန်းစ တက်တော့ ကျောင်းမှာအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်။ ဘာမှပြန်မလု ပ်တတ်ပဲငိုပြီးပြန် လာတတ်တယ်။ ဒါကို ဖခင်ကပိုစိ တ်ဆိုးတယ်။ နပန်းသမားရဲ့သားတ စ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး ပျော့ညံ့တဲ့သားကိုသူသိပ်အားမရခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့မိသားစု ကအမေရိကန် သားေ တွတော့မဟုတ်ကြဘူး။ ၁၉၆၉ မှပြောင်း လာခဲ့တဲ့ ကနေဒီယန်းမိသားစုပါ။ သူမူလတန်းစတက်တော့ Richmond Road ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်း သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။ သူ့အလယ်တန်း ကျောင်းသားဘဝမှာေ တာ့ဖခင်ြ ဖစ်သူကိုအားကျခဲ့ပြီး နပန်းသင်ပေးဖို့ပူဆာခဲ့ပါပြီ။ ဖခင်ကလဲသားဖြစ်သူ ကိုပျော့ညံ့တာ မကြိုက်တော့ သင်ေ ပးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကသူ့ကို လူဆိုးလေးတဦြး ဖစ်သွားေ စတဲ့ ပထမဆုံးအချက်ပါပဲ။
အထက်တန်းေ ကျာင်းသား ဘဝကိုသူရောက် လာချိန်မှာတော့ အနိုင်ကျင့်ခံရ တိုင်းလက်နဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ပါေ တာ့တယ်။ သူ့ထူးခြားမူ ကဖခင်ထက်စိတ် ဓာတ်ပိုပြင်း ထန်တယ် အလေးမ နပန်းပညာကိုလူင ယ်တယောက် လေ့ကျင့်တာထ က်ပိုလေ့ ကျင့်တယ်။ သူ့အသက် ၁၄နှစ်မှာပေါင် ၁၆၀ နီးပါး ခန္တာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အထိ သူဟာလေ့ ကျင့်ခဲ့တယ်။ ဒါကလဲနပန်းသ မားဖြစ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ လူချမ်းသာသား သမီးတွေငွေေ ပးပြီးတခြားလူ ကိုထိုးခိုင်းရင် သူထိုးဖို့နဲ့ ရန်ဖြစ်ရင်ပြန်ချဖို့ပါပဲ။ ဖခင်ဖြစ်သူကလဲ အမြဲအိမ်နဲ့ဝေးနေရေ တာ့ဒါကိုမသိဘူး။ မသမာတဲ့နည်း နဲ့ရတဲ့ငွေကို သူကအရက်သော က်ဆေးချတယ်။
ရန်ဖြစ်ရင် မေ သရုံတမယ် ထိုးတတ် တဲ့ဒီကလေး ဟာ၁၆နှစ် နဲ့ ၁၇နှစ်အရွယ်မှာတော့ ၉ကြိမ်တိတိအဖမ်းခံရပြီး ၄ကြိမ်ဟာဖခင် ကိုယ်တိုင်ကားရော င်းအိမ်ပေါင်ပြီးအချုပ်ခ န်းထဲက လျော်ကြေးေ ပးလိုက်ထုတ် ခဲ့ရတာပါ။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ရန်ဖြစ်မူမှာေ တာ့သူခံလိုက်ရတယ်။ သူ့ထက်လက်ဝှေ့ပညာ ပိုသာတဲ့လူငယ် တဦးကြောင့် ဆေးရုံ ၄ ပတ် တက်လိုက်ရတယ်။
” မင်းဘဝကို ဒီလိုပဲအရူး တယောက် လိုဖြတ်သန်းမယ်ဆို ငါတို့မိသားစု ထဲကနေထွက်သွားလိုက် မင်းလို လူမိုက်ငါတို့မိ သားစုမှာ ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။ “
ကျောင်းမှာဆိုလဲေ ငွပေးတိုင်းလိုက် လုပ်တဲ့လူဆိုပြီး Hunter dog လို့ သူ့ကိုကျောင်းသူေ တွကသရော် တတ်တယ်။ အတန်းပိုင်ဆရာမကလဲ တခြားကျောင်းသား ကိုဆုံးမချင်ရင်သူ့ ကိုဥပမာပေးပြီး ဆုံးမတ တ်တယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူကလည်း အမြဲအထ င်သေးဆူတတ်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာမိခင်ဖြစ်သူကလွဲရင် သူ့ဖက်မှာဘ ယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးမှာေ တာ့သားဖြစ်သူရဲ့ဒ ဏ်တွေကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်းေ တာ့ပဲဆေးရုံတင် လိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါကသူ့ကို လိမ္မာစေဖို့စ တင်ဖြစ်လာတဲ့ အသိတရားတခုပါပဲ။
အဖေဆေးရုံတင် ရရင်အောင် သူပြောင်းလဲ မှာမဟုတ်ဘူး။ သူအရမ်းချစ်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကေ ဆးရုံတင်လို က်ရတော့ သူအသိတရားရခဲ့တယ်။ ဒီစိတ်ကအထက် တန်းကိုအောင်ခဲ့ပြီး မီယာမီ တက္ကသိုလ်ကိုတက်ခွ င့်ရစေခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ တခြားသူမဟုတ်ဘူး ကျတော်တို့ငယ်ဘဝ P1 Gameဖြစ်တဲ့ WWE ဂိမ်းခွေမှာစသိခဲ့တဲ့ အမြဲကြိုက် ခဲ့ရတဲ့ နပန်းသမားကြီး The Rock ဖြစ်လာမယ့် Hollywood မင်းသားကြီး DwayneJohnson ဖြစ်လာမယ့် ကျတော်တို့သိတဲ့ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအြ မင့်ဆုံးမင်းသားကြီြး ဖစ်လာမယ့် The Rock ပါပဲ။
” အောင်မြင်မူ ဆိုတာ ကြိုသိကြတမ်းရကြတဲ့ အရာတခုမ ဟုတ်ဘူး။ အောင်မြင်မူဆိုတာ တနေ့ပြီးတနေ့ နေ့တိုင်း ပိုကောင်းလာအောင်မင်းရအောင်လုပ်မယ့် အသေးစား အရာတွေပဲ။ “THE ROCK
မီယာမီမှာတ က္ကသိုလ်စတ က်ချိန်ဟာ The Rock အတွက်အကြီးအ ကျယ်ဘဝအချိုး အကွေ့တခုပါပဲ။ အကြောင်းကေ တာ့ကျောင်းမှာ သူထပ်အနှိပ်ခံရတယ်။ မိခင်ကြောင့် ရန်မဖြစ်ဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဒီလူမိုက်အ ဖို့တော်တော် သည်းခံရမူနဲ့ တပြိုင်နက် အထီးကျန်မူ ပါတပါတည်းခံ စားခဲ့ရတယ်။ သူချစ်မိတဲ့ မိန်းကလေးကြ ပန်မကြိုက်တာတွေ ဖခင်ကသာြး ဖစ်သူကိုအထင်သေး တာတွေနဲ့အတူ The Rockဟာအမြဲလိုလိုတယော က်ထဲနေခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာသူ့ ကိုနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့သူကေ တာ့ အားကစားဆရာပါပဲ။ သူ့ကို ကျောင်းဘော လုံးအသင်းမှာ ထည့်ကစားစေခဲ့တယ်။ နဂိုထဲက ခန္တာကိုယ်တောင့်တင်းတဲ့ The Rock ဟာ ဒီလက်နဲ့ကိုင်ပြီး တဖက်အသင်းစည်း ကိုကျော်ဖြတ်ပြေးရ တဲ့ဘောလုံးကစား နည်းမှာ စိတ်တည်ငြိမ်လာခဲ့တယ်။
သူကစိတ်ဆုံြး ဖတ်ပြီးရင် အဖြစ်မနေလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်လ က်ရွေးစင်ဖြစ်လာသလို အဲဒီကတဆင့် national champion ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန် ကသူ့အသက်ဟာ ၁၉နှ စ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ Canadian Football League ကြီးကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး The Rock ဟာ၁၉၉၄ခုနှစ်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Canadian Football League ကိုယ်စားပြု အနေနဲ့ တိုက်စစ်မှူး၁၀ ဦးမှာပါအရွေးခံခဲ့ရသူပါ။ ၁၉၉၅ခုနှစ်မှာတော့ အသင်သားထဲသူ့နဲ့ မတည့်တဲ့သူတေ ယာက်နဲ့ပြသနာဖြစ် ရာကနေ နည်းပြရဲ့ဘက်လိုက် ဆုံးဖြတ်မူကြောင့် ထိုအသ င်းကထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအချိန်ကအင်္ဂလန်က ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် သူဟာဘောလုံးလော ကကိုစွန့် လွတ်ခဲ့ပါေ တာ့တယ်။ တစ်ရက် ဖခင်ဖြစ် သူနဲ့အတူ ထမင်းစားဝိုင်းမှာထိုင်နေတုန်း
” မင်းဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ”
” ကျတော့်အဖေ့လို နပန်းသမားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အောင်မြင်ချင်တယ် အဖေ ”
” သောက်ရူး မင်းဘဝဆုံးချင်လို့လား ငါ့ကိုကြည့်စမ်း ဒီလမ်းကိုရွေးခဲ့လို့ အခုဘယ်လိုဘ ဝဖြစ်နေပြီလဲ ” (ဖခင်ဖြစ်သူဟာနပန်းသတ်ရင်း ခါးရိုးကျိုးခဲ့ချိန်ပေါ့ )
” ငါဒီအလုပ်ကိုရွေးခဲ့လို့ ဘာမှမကျ န်ခဲ့ဘာမှပြန်မရခဲ့ဘူးကွ ။ အခုမင်းနေတဲ့ဒီ အိမ်ခန်းကျဉ်းလေးတခုပဲ ပိုင်တာကြည့်စမ်း ”
” ကျတော် အဖေခွင့်မပြုလဲ နပန်းသမား လုပ်မှာနော်။ ကျတော်အဖေ့ထက်ေ အာင်မြင်စေရမယ်လို့ ကတိပေးတယ်။ အဖေကျတော့်ကို ဒီနပန်းပညာသင်ပေးမှာလား မသင်ပေးဘူး လားအဖေ ”
“မင်း ၃နှစ်လုပ်လို့အကြီး တန်းကိုမတက်ရင် မင်း ဒီအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်မယ်လို့ ငါ့ကိုကတိပြန်ပေးရင် ငါသင်ပေးမယ် ”
ထိုအချိန်ကစပြီး ဖခင်ရဲ့ပညာရ ပ်အကုန်ကို သူသင်ခဲ့ ရတော့တယ်။ နပန်းကထင်ထား တာထက်ပိုလေ့ ကျင့်အားကြမ်းတယ်။ Boxing /ချုပ်နည်း ခန္တာကိုယ်ပေါ့ပါးေ တာင့်တင်းမူတွေ ကို သာမာန်ကစားသ မားထက်သင်ရတယ်။ တစ်ရက်ကိုကီလို များစွာစားရတယ်။ ၁၉၉၅ခုနှစ်ကေ နတနှစ်ခွဲလောက်အထိ သူWWE ရဲ့ UG ပွဲတွေမှာ ထိုးရတယ်။ UG ကတကယ့် လူသတ်ပွဲပါပဲ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်ကမှ ဒီUG သတ်နည်းတွေကိုစည်းမျ ဉ်းအသ စ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ထိုအချိန်ကသူသေကိုယ်သေဗြင်းရတဲ့ UG ဟာ mainstream ထက်တောင် ပိုကြမ်းခဲ့ပါတယ်။(YouTube မှာ ဒီWWE UG 1995 တုန်းက Videoတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ )
အိမ်ကငြွေေ ကးမပြည့်စုံဘူး ဒီတော့မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် TheRock ဟာတရားမ ဝင်ကြေးစားပွဲတွေ ခြံခတ်ပွဲတွေ Club တွေကအေ သသတ်ပွဲတွေမှာ ထိုးခဲ့ရတယ်။ Black Giant ဆိုတဲ့ ဒူဘိုင်း သူဌေးရဲ့ အမြဲနိုင်တဲ့ လူသတ်နပန်း သမားကို သူ LA ပွဲမှာနိုင်ခဲ့မူက The Rock ကို ၁၉၉၆ခုနှစ်ကုန်မှာ WWEရဲ့ Mainstream ထဲကိုဝင် ထိုးဖို့ဖြစ်လာခဲ့ ပါတော့တယ်။ WWF/WWE သူဝင်ခဲ့တယ်။ ပထမအ စမှာအဖိုး နာမည်ဖြစ်တဲ့ Rocky Maivia နဲ့ထိုးခဲ့ပေမ ယ့်နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့မာကြောမူ ပွဲတိုင်း နိုင်မူနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်က The Rock လို့နာမည်ပေးခဲ့ ပါတော့တယ်။ WWE ရဲ့ King ကြီး Stone Clod ကိုအနိုင် ရခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ The Rock ဟာ နှစ်တိုင်းအော င်မြင်မူတွေနဲ့အတူ WWE ချန်ပီယံ 17 ကြိမ် ၈ကြိမ်ဟာ WWE World No.1ချန်ပီယံ ၊ 2ကြိမ်ဟာ World Champion ကြီးဖြစ်သလို ၊ WWE ရဲ့ အထင်ကရချန်ပီ ယံ၆ယောက်ြေ မာက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ WWE ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး နာမည်အကြီးဆုံး ပြယုဂ်ဆိုလဲမမှားပါဘူး။
” စစ်မှန်တဲ့ေ အာင်မြင်မူရဖို့ ရိုးသားတဲ့ကြိုး စားမူလိုတယ် ကြိုး စားမူတိုင်းဟာ ထိုင်တွေးနေလို့ရှေ့မရောက်နိုင်ဘူး။ ကဲ ကျတော်တို့ခန္တာကို ယ်ကိုပင်ပန်းဖို့ဦးနှော က်ကိုပင်ပန်းဖို့မကြော က်ပါနဲ့ “
၂၀၀၀ြ ပည့်နှစ် နပန်းပွဲရာ သီနားချိန် The Rock ဟာသူငယ် ချင်းတေ ယာက်ရဲ့ရှုတင် ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ သူ့ကိုရုပ်ရှင်လော ကထဲဆွဲသွင်းဖို့လုပ် ခဲ့သူကတော့ဒါ ရိုက်တာ Stephen Sommers ပါပဲ။ ရှေ့မှာလည်း WWE Documentary တစ်ခု နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ရဲ့ ကားမှာမတတ်သာလို့ အရံကူညီေ ပးခဲ့တဲ့ The Rock အံ့သြသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပျော်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို သူအရမ်းကြို က်တဲ့မင်းသား Brendan Fraser ရိုက်နေတဲ့ Mummy ကားမှာ ပါရမှာကိုး။ The Mummy Returns မှာ The Rock ဟာ ဟစ်တီတီလူ မျိုးစုတခုဖြစ်တဲ့လူ မျိုးတခုကနေ Scorpion King ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Mathayus of Akkad တယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရ ပါတယ်။
ဟစ်တီတီ လူမျိူးစု ၇စုထဲ တချိန်က ရောမပြည်ကြီးရဲ့ အထင်ကရတို က်ခိုက် ရေးလူမျိုးစုတစုပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ဧပြီလမှာ ဒီကားကိုပြသခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၄၃၃ သန်းအထိရ ခဲ့တဲ့ကားကြီးပါ။ ဒီကားဟာ Best Makeup/Effects/Fanstay Film နဲ့ ဆုပေါင်း များစွာရခဲ့သလို WWE ကနပန်းသမားတယောက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ဗီလိန်ပိုင်းက အံ့အားသင့်စ ရာပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာတော့ ဒီကားထဲက ScorpionKing ကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရို က်ကူးဖို့မင်းသားရှာနေ တဲ့ဒါရိုက်တာကြီး Chuck Russell က The Rock ကို The Scorpion King ကြီးအတွ က်ရွေးခဲ့ပါပြီ။ Mathayus ဟာ ဟစ်တီတီလူမျိုး စုတွေထဲ ကတစုရဲ့နွယ်ဖွားပါ။ နာမာတွေခေတ် ထဲကကြေးစား တိုက်ခိုက်ရေးသမားေ တွဖြစ်သလို ထိုမျိုးစုတေ ယာက်က ဘုရင့်စစ်သား အယောက် ၂၀၀လောက် နဲ့ညီမျှသလို သူတို့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေဟာ ယနေ့ထိအဖြေရှာ မရသေးတဲ့နည်းပ ညာတွေနဲ့အသုံြး ပုခဲ့သူတွေပါ။
အသက်၂၀အရွယ်ေ ရာက်တိုင်း ကျားရိုင်း၁၀ကော င်ကိုလိုက်လံ သတ်ရပြီး ထိုသို့သတ် နိုင်မှအကြီးအကဲတွေက စစ်ပညာကိုသင်ကြားပေးပြီး လူမျိုးစုရဲ့တိုက်ခို က်ရေးသမားတွေ အဖြစ်သတ်မှ တ်သူပါ။ ဖာရိုတွေ မသိမ်းပိုက်ပဲသီး သန့်ပေးခဲ့ရတဲ့ တစုတ ည်းသောအီဂျစ် ရောမ ခေတ်အဆက်ဆက်လူမျိုးစုပါ။ The Rock ကထိုလူမျိုးစုရဲ့ Mathayus အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကားကေ တာ့အားလုံးကြ ည့်ဖူးကြမှာပါ မပြောတော့ဘူး။ ဒေါ်လာသန်း ၁၆၅သန်းရခဲ့သလို ဒီကား ဟာနောက်ပိုင်းTSK တွေကိုပြသဖို့ ပထမဆုံးလ မ်းဖွင့်မူပါပဲ။ ဒီကားအ တွက်ဒေါ်လာ ၅သန်းခွဲအထိ The Rock ဟာ အနုပညာကြေးရခဲ့ပါတယ်။
” ရွေးချယ်စ ရာဆိုတာကိုယ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ ကျတော်တို့လူတယော က်ချင်းစီတိုင်းမှာေ မွးရာပါပါရမီတ ခုစီပါတယ်။ ဒီပါရမီကိုကြိုး စားအသုံးချရဲဖို့ပဲလိုတယ်။ “THE ROCK
၂၀၀၄ခုနှ စ်မှာတော့ The Rock ဟာ နပန်းလောက ကနေအနားယူ ခဲ့ပြီးဒိုင်အဖြစ် ပဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူရုပ်ရှင်လော ကကိုတိုးဖို့နပန်း ထက်ပိုစိတ်ပင်ပ န်းတဲ့အရာ များစွာကို သင်ယူခဲ့ရတယ်။ The Rock ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဟာ ယနေ့ထိဆို ၃၀ကျော်ေ တာင်ရှိသွားပါပြီ။ ဒီကားတွေတ ကားချင်းစီ ကတော့အားလုံး ကြည့်ဖူးကြမှာ ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း မပြောတော့ပဲသူရိုက် ခဲ့တဲ့ကားကော င်းတွေထဲက ၅ ကားကိုပဲပြန်လည်ပြောပါရစေ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကားမပါလို့ဆိုပြီး မပြောကြေးပေါ့ သူရိုက်ခဲ့တဲ့ ကားတိုင်းက ရသသုတ တမျိုးစီ ရှိတတ်တယ်။ ဒီတော့ဒီ ၅ ကားကိုပဲရွေးချယ်ပါရစေ။
ရုပ်ရှင်ကားအြေ ကာင်းမပြောခင် ဒီကားရဲ့တခြားန ယ်ပယ်တွေကို စိန်ခေါ်လိုက်မူ တွေများလွန်းတယ်။ Machine Action လို့ပြောကြတဲ့ Layer သမားတွေအမြင်က ဒီ F&F ဟာကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်ေ လာကမှာ အကြီးမားဆုံးကား စတန့်တွေပြုလုပ်မူ ကား company တွေကနေ sponser ပေးမြူ ကီးမားမူတွေနဲ့အတူ တော်တော် ကြိုးစားခဲ့ ကြတဲ့ Film Series ကြီးပါပဲ။ Fast Five မှာ The Rock ပါခဲ့မူက လည်း အံ့အားသင့်စရာပါပဲ စစ်သား တယောက်ရဲ့ Body ထက်တောင်ကြည့်ကောင်းမူ အပစ်အခတ် အထိုးအကြိတ်က ပြောစရာကိုမလိုဘူး။ Fast Five ကို၂၀၁၁ခုနှ စ်မှာပြသခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ သန်း၆၃ ၀နီးပါး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားကVin Diesel ကိုယ်တိုင် နဲ့ ထုတ်လုပ်သူ တွေထဲကပါ The Rock ကို ရွေးချင် ခဲ့ပေမယ့်The Rockြ ငင်းခဲ့မူကြောင့် ပထမ မပါခဲ့ရဘူး။ နောက်မှ ဒါရိုက်တာရဲ့ အတင်းခေါ်ယူ မူကြောင့်ပါဝင် လာခဲ့ ပါတယ်။ သူငြင်းရခြင်း အကြောင်းကလည်း ထိုအချိန်ကရုပ် ရှင်သရုပ်ဆော င်ဘဝကို သူယုံကြ ည်မူမရှိဖြစ်နေချိန်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီ F&F ကားကပဲသူ့ကိုယုံ ကြည်မူထ ပ်ရစေခဲ့ပါတယ်။ Luke Hobbs ကြီးက လုံးဝအမိုက်စားဇာ တ်ကောင်ပေါ့ဗျာ။
The Rock ရဲ့အကြိုက်ဆုံး ကားတွေထဲ ကတကားပါပဲ။ မိဘတစ်ေ ယာက်ရဲ့စိတ်ထားကိုပြသ ထားသလို adventure film ကားတွေထဲက ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာသန်း ၃၃၅ သန်းထိရရှိခဲ့တဲ့ကားတကားပါ။
HOLLYWOOD, CA – DECEMBER 13: Dwayne Johnson with Lauren Hashian and their daughter, Jasmine Johnson attend the ceremony honoring him withaStar on The Hollywood Walk of Fame held on December 13, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)
GI Joe ကရုပ်ပြစာအုပ် ထဲကအောင်မြင်မူကေ ကြာက်စရာကော င်းခဲ့သလို ရုပ်ရှင်ကား အဖြစ်ထွက် လာချိန်မှာလဲ အံ့သြစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက သရုပ်ဆောင်ေ တွပါဝင်ခဲ့သလို ကိုရီးယား သားကြီး(Korea မှာကျတော်အကြိုက်ဆုံး တစ်ဦးတည်းသော မင်းသားကြီး )လီဗြောင်ဟွန်း လဲပါခဲ့တာပေါ့။ ဒီကားအတွက် လီဗြောင်ဟွန်းဟာ ဂျပန်ဓားပညာကို ၆ လအထိ သင်ခဲ့ရသလို Gym ကစားမူတွေကို အချိန်ကြာက စားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာဒေါ်လာသန်း ၃၇၅ကျော်ထိရခဲ့သလို highest-grossing filmဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားတကားပါ။ G.I.Joe ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တေ ယာက်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့The Rock ဟာဒီကားမှာလဲေ အာင်မြင်မူများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ခုနှစ်ဒီကား ကိုရိုက်မယ်စီစဉ် တော့ တော်တော်ခေါ င်းစားခဲ့ကြတယ်။ခေတ် အဆက်ဆက်နှစ်၆၀ကျော် အတွင်းရိုက် လာခဲ့တဲ့ Hercules မင်းသားတွေဟာ အောင်မြင်မူ များစွာရခဲ့ကြ တော်ရုံမင်း သားတွေနဲ့ရိုက်လို့မ ရနိုင်တဲ့ Hercules ရဲ့မူလဂုဏ်နဲ့ညီရမ ယ့်ကာယဗလ တွေရှိမှရနိုင်ပါမယ်။ သူ့ရှေ့က Steeve တို့အာနိုးတို့ Ferrigno တို့က ကမ္ဘာ့ No.1ကာယ ဗလမော င်တွေလဲဖြစ် Hercules နဲ့လည်းကို က်တဲ့သူတွေပါ။ ဒါရိုက်တာ BrettကHerculesကို နှစ်၃၀ကျော်ြ ကာမှ အသစ်ထပ်ရိုက် ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့Hollywoodမင်း သားထဲ အကြီးဆုံးအတောင့် ဆုံးကိုလိုက်ရှာတယ်။ အရပ်အမောင်းဗလ ရုပ်အနေအထားက The Rock ကလွဲရင် ဒီကားကိုဘယ် သူနဲ့မှရိုက်လို့ မရနိူင်ဘူး။ The Rock ကိုယ်တိုင်လဲ Hercules ကိုရိုက်ဖို့မူလထက် ၂ဆကြိုးစားခဲ့ရသလို တရက် ကို၁၃နာရီနှုန်း အားကစားတွေ လု ပ်ခဲ့ရပါတယ်။
နတ်ဘု ရားနဲ့လူကမွေး လာခဲ့တဲ့ Hercules ဟာ 12Labours ကိုအော င်မြင်ခဲ့သူပါ။ ပြည်နှင်ဒဏ်ကြောင့်ေ ကြးစားလူသတ် သမားတဦးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Hercules ဟာ ကိုယ်ခံပညာ ဓားရေး သာမာန်လူသား ထက်သာလွန်သူပါ။ Brett က ရှေ့မှာ Xmen တွေရိုက်ထားတော့ ဒီအကွက်ကို သူအသုံးချတယ်။ The Rock ကိုရှေ့ကသူလု ပ်နေကျပုံစံေ တွနဲ့မတူအောင် ဓားရေးပါသ င်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ထူးခြားမူ ကတော့ Hercules ကားမှာThe Rockလိုငမာကောင်ကြီးတောင်ပင်ပန်းလို့ နေပူထဲမူးလဲ မှုတွေရှိခဲ့ ပါတယ်။ တခြားမင်းသားဆိုေ နရာမှာတင်အသ က်ထွက်ေ နလောက်ပြီ။ ဒါကမင်းသား တယောက် ဆိုတာနဲ့ မိတ်ကပ် တပိဿ အကျီ င်္ခေါက်ရိုးမကြေပဲရုပ်ချောမှ တော်ကီကောင်းမှ လို့ထင်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အဖို့ရှက် စရာပါပဲ။
ဘယ်လွယ် ပါ့မလဲ Hollywood’တို့Bollywood တို့လို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရုပ်ရှင်န ယ်ပယ်မှာ သရုပ်ဆောင်တ ဦးဖြစ်ဖို့သာ မာန်ရူတင်သွား အသားရေထိန်း ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက် ချခန်းစတန့်ခ န်းလူစားထိုး ပြီးရင်ကိုယ် တိုင်လုပ်ကြည့်ဘ ယ်လောက် ခက်လဲပြန်ပြောနို င်ရုံလောက်နဲ့ ပရိတ်သတ်အား မရမူကို ပြန်ရန်တွေ့ဖို့လောက်နဲ့ တကယ့်သရုပ်ေ ဆာင်တဦး ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီ Hercules ကားကို ရိုက်ဖို့၂ ၀၀၄ခုနှစ် မတိုင်ခင်ထဲက The Rockကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးတယ် စီလဲစီစဉ်ခဲ့ ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၄ခုနှစ်မှတ ကယ်ရိုက်ဖြ စ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီကားကိုရိုက် ဖို့လူရွေးပွဲလုပ်မ ယ်လို့ Paramount ကိုကြေငြာထဲက ဂီတဘုရ င်မကြီးထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ Mariah Carey ကThe Rockကို ရွေးသင့်တယ်လို့ သူမကထောက်ခံခဲ့ ပါတယ်။ သန်း ၂၅၀ နီးပါးရတဲ့ဒီ Hercules ကားဟာလဲ TheRock ရဲ့ကားကောင်းတွေထဲကတကားပါ။
” ခန္တာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ဖို့အား ကစား လုပ်ရတယ်။ ကျတော်တို့ေ အာင်မြင်မူရဖို့တော့ အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲရတယ်။ “THE ROCK
2012 တို့ World War Z တို့ ကြည့်ဖူးကြမှာပေါ့ ။ လူအင်အား Crama အားနဲ့ လုပ်ချလိုက်တဲ့ Hollywood ကားကြီးတွေ။ ဒါပေမယ့် ဒီSan Andreas ကားကတော့ ခွဲထွက်ပ စ်တယ်။ Roadshow Studios ကြီးထဲလူတစု ၄လတိတိ မနားမနေ ဒီကားကို Designဆွဲကြ Crama အချိတ်အဆက်တွေတွက်ကြတယ်။ Ray ဆိုတဲ့က ယ်ဆ ယ်ရေးသမားတ စ်ယောက်ရဲ့ ရုန်းကန်မူကို ပြသထားတဲ့ ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ငလျင်တွေမုန်တိုင်းေ တွနဲ့မြို့ကြီးကပျော က်ကွယ်မလိုဖြစ်နေချိန် ဒီကယ်ဆယ်ေ ရးသမားရဲ့နေရာက ဘယ်လို ရုန်းကန်ခံစား သွားလဲဆိုတာ ကိုရိုက်ပြထားတဲ့ ကားကော င်းတစ်ကားပါပဲ။ ၄၇၄ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး The Rock ရဲ့ ခွဲထွက်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မူ တခုကိုပြသခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ရဲ့ ကားကော င်းတကားပါပဲ။
လက်ရှိထိ The Rock ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေပြောပါဆိုရင် …
ကားတွေပဲဖြစ် ပါတယ်။ 3Dကာတွ န်းကားတွေမှာ အသံသရုပ်ဆော င်အဖြစ်ပါခဲ့သလို တကားချင်းစီဟာ ရသတမျိုးစီ သရုပ်ဆောင်မူကွဲပြားစွာ ထွက်ခဲ့ တာတွေချည်းပါ။ ဟာသ၊ အက်ရှင်၊ အငိုအလွမ်း၊ မေတ္တာဖွဲ့အကုန် ရတဲ့လူ သန်ကြီးပါပဲ။ F&F 8 တို့ Mona တို့လဲရှယ်ကြည့် သင့်တဲ့ ကားတွေဖြစ်နေသလို Baywatch /Jumanji တို့ကလဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာပြသခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုေ တွရခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါတင်မကပါဘူးThe Rock ဟာဂီတဖက် မှာလဲပါရမီရှိသူပါ။ Journey ကဇာတ်ဝင်တေး Be Cool ကဇာတ်ဝင်တေး Tooth Fairy ကဇာတ် ဝင်တေးတွေကိုလဲကိုယ်တို င်ဆိုထားခဲ့သလို WWE သီချင်းတချို့ ကိုလည်း ဆိုထားခဲ့သူပါ။The Rock ရခဲ့တဲ့ဆုေ တွပြောပါဆိုရင် Pro Wrestling Illustrated / WWE World Champion အပြင် နပန်းဆုေ ပါင်း၅၀ကျော်နဲ့ People Choice Award ကြီး အပြင် ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ Hollywood Walk of Fame မှာမှတ်တ မ်းတင်ခံ ရမယ့်သူအဖြစ် သမိုင်းဝင်သွားခဲ့ပါပြီ။
အပေအေ တလူဆိုး ဘဝကနေ ၉ ခါတိတိ အဖမ်းခံရ ထောင် ၁၁ လကျဖူးတဲ့ ဒီလူမိုက်က အမေကြောင့်လိမ်မာလာရင်းေ ဘာလုံးကစားသမားဘ ဝထဲရောက်ခဲ့တယ်။ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ နပန်းသမားဘဝ ကိုရောက်လာ ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့အထ င်ကရ WWE သမိုင်းရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးလူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထိုကတဆင့်ရုပ် ရှင်လော ကထဲမအူမ လည်နဲ့ ထပ်ဝင်လာခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အမြင့်ဆုံးမင်း သားအဖြစ် ၂၀၁၆ မှာကြေငြာခံလာရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် The Rock ဟာ 64.5 million နဲ့ ၂၀၁၆နှ စ်ရဲ့ဝင်ငွေအမြ င့် ဆုံးမင်းသာြး ဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သြော်ဒါတင်မ ကဘူး DC ရဲ့ Hero တစ်ကော င်ဖြစ်တဲ့Shazam အနေနဲ့လဲ Black Adam အဖြစ်ပါဝင် လာဦးမှာပါ။ ဒါတင်မ ကသေးဘူး အမေရိကန်သမ္မတ အဖြစ်ပါရွေးေ ကာက်ခံဖို့ လုပ်ခဲ့သူပါ။
” လူသား ချင်းအနိုင် ကျင့်မူတွေကို ကျွန်တော် ရှုံ့ချတယ်။ ခဗျားသိပ်အနို င်ကျင့်ချင်ရင် ကြိုးဝိုင်းထဲကို လာခဲ့လိုက်။ လက်ဝှေ့ နပန်းကိုယ်ခံပညာပြိုင် ပွဲတွေက မ္ဘာမှာ အများကြီး ဝင်ပြိုင် လို့ရတယ်။ လက်နက်မဲ့သူ အင်အား မရှိသူကို အနိုင်ယူခြင်းက လူမဆန်တဲ့လူ သားေ တွရဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ ကျတော်တို့က လူ့ဘောင်ကျော်ြ ပီးဘယ်ေ တာ့မှ ငြိမ်း ချမ်းသူေ တွ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ကျတော် အရိုးသား ဆုံးပြောမယ်။ ကျတော်တို့က နိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လူမှနိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းနိုင်ဘူး”
ဘောလုံးအသ င်းကအထုတ်ခံရ လို့စိတ်ကျေ ရာဂါကို ခံစားခဲ့ရသူ။ ညအိပ်ပျော်ရင်း အသက်ရှူခ က်ခဲတဲ့ရောဂါ ကိုခံစားခဲ့ရသူ။ WWEကြောင့်ကြွက်သားပြဲရာက ယခုထိ ဒဏ်ခံနေရသူ။ ရုပ်ရှ င်လောကရဲ့ဝေဖန်မူေ တွကြောင့် သရုပ်ဆောင် ဘဝကို အားငယ်ခဲ့ရသူ။ သူသာဒေါ သကိုရှေ့ထားခဲ့ရင် သူ့ကိုစော်ကား တဲ့လူတိုင်းကိုအပြင်မှာ အမှုန့်ြေ ခလို့ရတဲ့သူက မိခင်ကြောင့်အ သက်၂၀ကျော်ထဲက ဘယ်ေ တာ့မှအပြင်မှာ လက်နဲ့ မရှင်းခဲ့တော့ပါဘူး။ ဒီလူသန်ကြီးမှာလည်း ခုလိုအားင ယ်ငိုခဲ့ရတဲ့အ ချိန်တွေရှိတယ်။ F&F ရိုက်နေတုန်း သူလက်ထိသွား တယ်။ ထိုနေ့ကအေ မ့မွေးနေ့ ။ စန်တာကေ လာ့အကျီ င်္ကြီးနဲ့မိခင် ရဲ့မွေးနေ့ကို သွားကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ သူငိုခဲ့ရတဲ့အ ချိန်တွေအနှိ မ်ခံခဲ့ရတဲ့ငယ်ဘဝအ တိတ်တွေ လူတိုင်းကငေ ပါကြီးလို့ လှောင်ခံရတဲ့ လူငယ်တဦးရဲ့ စိတ်ဒ ဏ်ရာကို ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးမှသိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမ ယ့်ယနေ့အချိန် အချိန်မှာတော့ ထိုငပေါကြီးဟာန ယ်ပယ်ပေါင်းစုံရဲ့ အထင်ကရလူသားကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
စိတ်အား မငယ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ လောကမှာကိုယ်က အရှုံးမပေးမ ရပ်သ၍ ဘယ်ပန်းတိုင်မှ မပျောက် သွားပါဘူး။ တလောကလုံးကသောက်ပေါပါ ပေါ်ပင်ပါလို့ြေ ပာနေလဲ ခဗျားသာစိ တ်ဓာတ်မကျရင် ထိုသို့ပြောသူတွေထက် သာတဲ့နေရာတခုကိုမလွဲ မသွေရလာမှာပါ။“ကျတော်တို့ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ပထမဆုံးခံစားရ သူတွေမဟုတ် သလို နောက်ဆုံးခံစားရ သူတွေလည်း မဟုတ်ဘူးလူတို င်းစိတ်ဓာတ်ကျ ဖူးကြတယ်။ တပါထဲအထီး ကျန်မူပါ ခံစားဖူးကြတယ်။”The Rock
သူဟာ ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံး အချိန်တွေကိုရင် ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျမူမှာ အချိန်မကုန် ခဲ့ဘူး။ Jumanji ကိုရိုက်တော့လဲ သူဟာ စိတ်ဓာတ်ကျမူ များစွာခံခဲ့ရတယ်။ ဒါရိုက်တာ Johston ကရှေ့ကရိုက်ထား တဲ့မင်းသားကြီးRobin Williams ရဲ့ကားကိုပြန်ရိုက် မှာမဟုတ်ပဲ အသစ်ပြ န်ရိုက်မူမှာ The Rock ကိုဝေဖန်မူေ တွရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ အဆင်ပြေစွာပဲ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ပြသပြီး အောင်မြင်မှုကို ရယူခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘယ်လိုပဲစိတ်ဓာ တ်ကျမူတွေရှိခဲ့ခဲ့ အနှိမ်ခံရခဲ့ခဲ့ The Rock ဟာ ယနေ့အချိ န်မှာတော့ WWE /ရုပ်ရှင် ၂ခုလုံးမှာ အထင်ကရလူ သားကြီးအဖြစ် သမိုင်းဝင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျတော်တို့စိတ်ဓာတ်ကျ ကြအနှိမ်ခံရ အထီးကျန်တတ်ကြတယ်။ ဒါဆိုTheRock ကိုကြည့်လိုက်ပါ သူ့လောက် ကျတော်တို့မ ဆိုးသေးပါဘူး။
The Rock ဟာသာ မာန်မိသားစု ကနေမွေးဖွားခဲ့ပြီး အိမ်ခန်းကျ ဉ်းလေးထဲမှာ WWE မရောက်ခင်ထိနေခဲ့ရသူပါ။
The Rock ဟာသူဌေးသားေ တွခိုင်းရင်ဘာ မဆိုလုပ်ေ ပးရတဲ့လူပေါတယော က်ဖြစ်ခဲ့သူပါ။
The Rock ဟာဘောလုံး သမားဘဝနဲ့လဲေ အာင်မြင်ခဲ့သူပါ။
The Rock ဟာဘောလုံးအ သင်းကအထု တ်ခံရမူနဲ့တပြိုင်နက် စိတ် ကျရောဂါရခဲ့သူပါ။
The Rock ဟာ WWE ကို မရောက်ခ င်ကြေးစား တရားမဝင်သတ်ပွဲေ တွမှာနပန်းသမာြး ဖစ်ခဲ့သူပါ။
The Rock ဟာ WWE ရဲ့ ချန်ပီယံ ဖြစ်တဲ့ ၆ယောက်မြောက် နပန်းသမားပါ။
The Rock ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအု ပ်ဟာစာပေေ လာကမှာလဲ The New York TimesBest Seller စာအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
The Rock ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရဲ့ ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးမ င်းသားဖြစ်သလို Best 20 Actorsမှာလဲ ပါဝင်ထားသူပါ။
The Rock ဟာ Hollywood Walk of Fame မှာလဲ ၂၀၁၇ခုနှစ် မှာသမိုင်းဝင်ခံ ရမယ့်မင်းသားပါ။
Top 100 Most Powerful Celebrities မှာလဲ No.25 ဖြစ်သလို သူရရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထိ အနုပညာကြေးထဲက ဒေါ်လာ သန်း၂၀ကိုလှူတန်းခဲ့သူပါ။
The Rock ဟာလက်ရှိမှာ လဲ WWE မှာပြန်လည်ပါ ဝင်နေသူဖြစ်သလို သူပြန်လည်ပါဝ င်တဲ့နှစ်တွေအ တွင်းမှာလဲ ဆုတွေထပ် မံရရှိထားသူပါ။ WWE Hall Of Fame မှာလဲသမိုင်းဝင် ထားခဲ့သူပါ။
The Rock ဟာ နပန်းသမား မင်း သားအပြင် ကာယနည်းပြ ရုပ်ရှင်ထုတ်လု ပ်သူအဖြစ်ပါလုပ်ကို င်နေသူဖြစ်နေပါပြီ။
The Rock ဟာသူ့လ မ်းစဉ်လို က်လာတဲ့ ငယ်ဘဝပို ကြမ်းခဲ့ရတဲ့ John Cena ကိုလဲကူ ညီမူများ စွာပေးခဲ့ပြီး John Cena ဟာလဲလက်ရှိမှာ Hollywood ရဲ့မင်းသား တဦးဖြစ် လာ ခဲ့သူပါ။The Rock ဟာသူတချိန် ကအနှိမ်ခံ အထု တ်ခံခဲ့ရတဲ့ မီယာမီ တက္ကသိုလ်ကိုလဲ အားကစားအတွက်ေ ဒ်ါလာ တစ်သန်းထိလှူခဲ့သလို ကမ္ဘာ့အစာ အဟာရ ချို့တဲ့ကလေးသူင ယ်များအတွ က်လဲဒေါ်လာ ၃၉သန်းထိ လှူတန်း ထားခဲ့ပါပြီ။ The Rock ဟာ ဘောလုံးသမား နပန်းသမားကြေးစားနပန်းသမား ဘဝကနေ Hollywood ရဲ့ Top 25 ထဲပါဝင်လာ တဲ့တဦးတ ည်းသော WWE ရဲ့ တဦးထဲသော မင်းသားပါ။
Ref-TheRock: “Best Sellers Plus”.. Dwayne Johnson Twitter-World’s 100 Most Influential-People-ရေးသားသူ-Htet Wa Na..
Tags:The Rock, ဗဟုသုတ
အမိုကျစား ကောကျကွောငျးနှငျ့ ဆကျဆီကကြ မိမိုကျနတေဲ့ မမသငျဇာရဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေး…………